5ta Weerar ee Ugu Weyn Ee Lagu Sameeyay Goobaha Ganacsiga | Martech Zone
Arbaco, Juun 1, 2020 Arbaco, Juun 1, 2020 Douglas Karr
Mid ka mid ah tirakoobyada layaabka leh ee la xiriira COVID-19 iyo xirxirayaashu waa koror aad u ballaaran oo ku yimid waxqabadka ganacsiga e-ganacsiga:
COVID-19 waxay si buuxda u dardar gelisay kobaca ganacsiga e-commerce, sida lagu sheegay warbixin Adobe soo saartay maanta. Wadarta kharashaadka khadka tooska ah ee internetka bishii 82.5aad waxay kudhaceen $ 77 bilyan, kor u dhaaftay XNUMX% sanad ka badan.
John Koetsier, COVID-19 Kobaca E-Ganacsiga ee Dardargeliyay '4 illaa 6 Sano'
Ma jirto wershad aan taaban… shirarku waxay noqdeen wax iska caadi ah, iskuuladu waxay u wareegeen maareynta barashada iyo khadka tooska ah, dukaamada waxaa loo wareejiyay qaadista iyo keenista, makhaayadaha ayaa lagu daray qaadashada, iyo xitaa shirkadaha B2B waxay u beddeleen khibradooda iibsashada si ay u siiyaan rajooyin aaladaha si ay iskood ugu adeegaan macaamiladooda internetka.
Kororka E-commerce iyo Khataraha Amniga
Sida korsashada badan, dambiilayaashu waxay raacaan lacagta… waxaana jira lacag badan oo khiyaanada ganacsiga elektaroonigga ah. Sida laga soo xigtay Sayniska calaamadaha, dambiyada internetka ayaa ka dhalan doona in ka badan $ 12 bilyan oo khasaare ah sannadka 2020. Marka shirkadaha cusub ay u wareegaan ganacsiga elektaroonigga ah, waxaa lama huraan ah inay ku daraan amniga xilliga kala guurka ee ay ku jiraan… ka hor intaanay kharaj gelin ganacsigooda.
5-ta Weerar ee ugu Weyn E-commerce
La Wareegida Koontada (ATO) - sidoo kale loo yaqaan khayaanada la wareegida xisaabta, ATO ayaa mas'uul ka ah qiyaastii 29.8% dhammaan khasaarada khiyaanada. ATO waxay heleysaa aqoonsiga gelitaanka isticmaalaha si ay ula wareegaan xisaabaadka internetka. Tani waxay awood u siineysaa inay helaan xogta kaarka deynta ama ay soo iibsadaan amar aan la oggoleyn iyagoo isticmaalaya koontada isticmaalaha. Qiyaanada ATO waxay adeegsan kartaa qoraallo otomaatig ah oo galiya aqoonsiyada si guud ama noqda qof bini aadam garaacaya iyaga oo marinaya koontada. Amarada waxaa lagu geyn karaa cinwaannada gudbinta ee lala socdo halkaasoo alaabada lagu qaadayo laguna isticmaalayo ama loogu iibinayo lacag ahaan. Lammaanaha isticmaalaha iyo lambarka sirta ah ayaa badanaa lagu iibiyaa si weyn ama waxaa looga ganacsadaa suuqyada Webka ee Madow. Sababtoo ah dad aad u tiro badan ayaa adeegsada isla soo gal iyo isgarad isku mid ah, qoraallada waxaa loo adeegsadaa in lagu tijaabiyo magaca iyo lambarka sirta ah bogagga kale.
Kaadhadhka Chatbot - bots waxay noqonayaan cunsur muhiim u ah goobaha ganacsiga elektaroonigga ah ee adeegsadayaasha si ay ula macaamilaan shirkadaha, ula socdaan jawaabaha caqliga leh, oo ay toos ula hadlaan wakiillada. Caan ahaantooda darteed, iyaguna waa bartilmaameed waxayna mas'uul ka yihiin 24.1% dhammaan howlaha khiyaanada ah. Isticmaalayaashu ma kala saari karaan farqiga u dhexeeya sheeko xalaal ah ama mid qaldan oo laga yaabo in laga furo bogga. Isticmaalka adware ama cirbadaha qoraalka cirbadaha ee khayaanada ah ayaa laga yaabaa inay soo bandhigaan sheeko sheeko pop-up been abuur ah ka dibna ka soo saaraan macluumaadka ugu badan ee xasaasiga ah isticmaalaha inta ay awoodaan.
Faylasha gadaal - Dambiilayaasha internetka waxay ku rakibaan khayaanada bartaada ganacsiga elektarooniga ah iyada oo loo marayo meelaha aan la hubin ee laga soo galo, sida wixii ku-xirmay ee waqtigoodu dhammaaday ama meelaha laga soo galo. Mar alla markay galaan, waxay galaangal u leeyihiin dhammaan macluumaadka shirkaddaada, oo ay ku jiraan macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed ee macaamiisha (PII). Xogtaas ayaa markaa la iibin karaa ama loo isticmaali karaa si loogu helo marinnada koontooyinka isticmaalaha. 6.4% dhamaan weerarada waa weerarada feylka gadaal.
Dhiirigelinta Sisilka - foomamka onlaynka ah, cinwaanada URL, ama xitaa sheeko xariirku waxay bixiyaan dhibco gelitaan xog ah oo laga yaabo inaan la sii adkayn waxayna siin karaan marin ay u galaan haakarisku inay ku weydiiyaan xog-ururin dambe. Weydiimahaas waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro macluumaadka shakhsiga ah ee keydka macluumaadka goobta lagu hayo. 8.2% dhammaan weerarada waxaa lagu sameeyaa cirbadaha SQL.
Sawir-ka-goos goobeed (XSS) - Weerarada XSS waxay awood u siinayaan kuwa wax weeraraya in ay ku duraan qoraalada adoo adeegsanaya biraawsarka isticmaalaha bogagga internetka ee ay adeegsadaan dadka kale. Tani waxay u suurtagelineysaa jabsadeyaasha inay ka gudbaan kontaroolada marinka iyo helitaanka macluumaadka aqoonsiga shaqsiyeed (PII).
Waa kuwan sawir-gacmeed weyn oo ka socda Sayniska Calaamadaha on Soo Kordhinta Hantida E-commerce - oo ay ku jiraan hababka, qaababka, iyo tallaabooyinka difaaca ee shirkaddaadu waa inay ka warqabtaa oo ay ku dartaa istiraatiijiyad kasta oo ganacsi e-commerce ah.
Tags: koontada koontadala wareegida koontadaweerarada la wareegida koontadakhayaanada la wareegida xisaabtaatoalbaabka dambeQorista iskutallaabtadambiyada internetkae-commercetirakoobka weerarka e-commercedifaaca khiyaanada e-ganacsigahababka khiyaanada elektaroonigga ahqaababka khiyaanada e-ganacsigakhiyaanada ecommerceamniga ganacsigakhayaanada internetkaamniga dukaamada internetkaammaankacilmiga keliyaduritaanka sqlweerarada ugu sareeya ee wadankaweerarada webka
Tarjumaad iyo Qoraal si kor loogu qaado Waxqabadka Suuqgeynta Video-ga